Nyinsɛnyigu—Nea Bible Aka
Ɔbaa nyansafo tie n’ahonim
Afe biara, nkurɔfo boapa yi nyinsɛn ɔpepem pii gu. Nkwadaa a woyi wɔn gu no, wɔn dodow boro aman pii so nnipa.
Obi pɛ a na oyi nyinsɛn gu anaasɛ ɛyɛ bɔne?
Nneɛma pii na ɛma mmaa yi nyinsɛn gu. Ebi fi sikasɛm anaa ɔbaa ne barima no ntam nsɛmnsɛm. Ebi nso wɔ hɔ a, ɔbaa no pɛ sɛ onya kwan toa ne sukuu so, ɔyɛ n’adwuma, anaa ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ baatankoro. Nanso ebinom bu nyinsɛnyigu sɛ ɛyɛ bɔne. Wɔn adwene ne sɛ, ɔpemfo yi nyinsɛn gu a, ɛkyerɛ sɛ asɛde a ɔwɔ sɛ ɔhwɛ akwadaa no so bɔ ne ho ban no, wapia ato nkyɛn.
Onyankopɔn bu nkwa sɛ ade kronkron, ɛnkanka nnipa nkwa. (Genesis 9:6; Dwom 36:9) Nkwadaa a wɔhyɛ yafunum nso, wɔn nkwa yɛ kronkron. Nyankopɔn ahyɛ da asiesie mmaa yafunum anaa wɔn awotwaa sɛ ɛmmɔ nkwadaa a wɔrenyin ho ban. Bible kyerɛwfo bi kaa sɛ: “Wode me siee me maame yam.” Ɔde kaa ho sɛ: “Bere a meyɛ mogyatɔw mpo no, w’aniwa huu me, na wɔkyerɛw m’akwaa nyinaa wɔ wo nhoma mu, nna a wɔnwenee no.”—Dwom 139:13, 16.
Wohwɛ Mmara a Onyankopɔn de maa Israel man no a, ɛno nso ma yehu sɛnea obu akwadaa a ɔhyɛ yafunum nkwa. Bio, Onyankopɔn ama yɛn ahonim anaa tiboa. Ɛno nso ma yehu n’adwene wɔ akwadaa ɔhyɛ yafunum ho. Onyankopɔn mmara kaa sɛ, sɛ obi tow hyɛ ɔpemfo so na akwadaa a ɔhyɛ ne yam no wu a, wobebu no kumfɔ ama ɔno nso de ne nkwa atwa so. (Exodus 21:22, 23) Nanso atemmufo no mfiti prɛko pɛ nku no; wɔbɛhwɛ tebea a na ɔwom ne nea ɛma ɔyɛɛ saa.—Numeri 35:22-24, 31.
Onyankopɔn ama nnipa ahonim nso. Sɛ ɔbaa tie n’ahonim anaa ne tiboa na wantu nyinsɛn angu a, n’ahonim bɔ n’aba so. * Nanso sɛ wantie n’ahonim a, ebetumi ahaw no anaa abu no fɔ mpo. (Romafo 2:14, 15) Nhwehwɛmu a abɛtɔ gua mpo kyerɛ sɛ mmaa a wotu nyinsɛn gu no, wɔtaa dwennwen paa, na wonya adwenemhaw.
Nanso yɛmfa no sɛ obi anyinsɛn putupuru, nso ohu sɛ ɛbɛyɛ den ama no sɛ ɔbɛtete akwadaa no. Dɛn na ɔbɛyɛ? Bible ma yehu sɛ wɔn a nsu mu oo, awia mu oo, wotie Nyankopɔn asɛm no, ɔno nso abɔ wɔn anohoba sɛ: “Ɔnokwafo na wo ne no bedi no nokwaredi mu; ɔbarima [anaa ɔbaa] a odi mũ na wo ne no bedi no mũdi mu.” (Dwom 18:25) Bible san ka sɛ: “Yehowa dɔ atɛntrenee, na ɔrennyaw n’anokwafo.”—Dwom 37:28.
“Wɔn ahonim ka wɔn ho di adanse . . . na wobu wɔn ho fɔ anaa woyi wɔn ho ano wɔ wɔn ankasa nsusuwii mu.”—Romafo 2:15.
Na sɛ woayi nyinsɛn agu pɛn nso ɛ?
Ruth yɛ ɔbaatankoro. Ɔkaa sɛ: “Ná mewɔ nkwadaa mmiɛnsa dedaw, enti ɛyɛɛ me sɛ baako bɛka ho a, mintumi nhwɛ wɔn. Miyii akwadaa no gui, na ɛno akyi no, mihuu sɛ mayɛ bɔne paa.” * Nea Ruth yɛe yi, wohwɛ a, Onyankopɔn ntumi mfa nkyɛ no anaa?
Yesu Kristo kaa asɛm bi a ɛma yehu Nyankopɔn adwene wɔ asɛm yi ho. Ɔkaa sɛ: “Mamma sɛ merebɛfrɛ treneefo, na mmom merebɛfrɛ nnebɔneyɛfo de wɔn akɔ adwensakra mu.” (Luka 5:32) Enti sɛ yɛyɛ bɔne na yenu yɛn ho paa, na yɛsakra yɛn adwene na yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔmfa nkyɛ yɛn a, ɔde bɛkyɛ yɛn dodo. Bɔne no so sɛ dɛn mpo a, ɔde bɛkyɛ yɛn. (Yesaia 1:18) Bible ka sɛ: “O Onyankopɔn, koma a abubu na apɛtɛw na worempo.”—Dwom 51:17.
Sɛ obi nu ne ho na ɔbɔ Nyankopɔn mpae a, ɔma no ahonim pa ne asomdwoe. Bible se: “Momfa mpaebɔ ne nkotɔsrɛ ne aseda so mfa mo adesrɛ nto Onyankopɔn anim ade nyinaa mu; na Onyankopɔn asomdwoe a ɛboro adwene nyinaa so no bɛbɔ mo koma ne mo adwene nsusuwii ho ban.” (Filipifo 4:6, 7) * Ruth a yɛkaa ne ho asɛm no suaa Bible, na ɔkaa ne komam asɛm kyerɛɛ Nyankopɔn. Ɛno akyi no, ohuu sɛ ne ho adwo no fɔmm. Ohuu sɛ Onyankopɔn na ‘fafiri wɔ ne nsam.’—Dwom 130:4.
“[Onyankopɔn nhwɛ] yɛn bɔne so ne yɛn nni, na ɔnhwɛ yɛn mfomso so ntua yɛn ka.”—Dwom 103:10.
^ nky. 8 Sɛ ɔbaa fa yafunu na ɛkɔba sɛ ɔno anaa abofra no nkwa da asiane mu a, ɛno nkyerɛ sɛ ontu nyinsɛn no ngu. Sɛ ɔbaa no kɔ awoɔ so na sɛ ɔne abofra no nyinaa gyina owu ne nkwa nkwanta a, awarefo no na ɛsɛ sɛ wɔkyerɛ nea wonnye no nkwa. Nea yɛreka yi mpo, wokɔ aman pii a edi yiye so a, ɛntaa nsi.
^ nky. 12 Wɔasesa din no.
^ nky. 14 Anidaso a yɛwɔ sɛ daakye awufo bɛsɔre no nso ma yenya asomdwoe. Hwɛ “Nsɛmmisa a Efi Akenkanfo Hɔ” wɔ April 15, 2009 Ɔwɛn-Aban no mu. Ɛma yehu Bible mu nsɛm bi a ɛkyerɛ sɛ ebetumi aba sɛ akokoaa a owu wɔ ne maame yam benya owusɔre.
Nea Bible Aka Afa Nyinsɛnyigu Ho